तपाईंलाई थाहा छ ? गूगलमा झुक्किएर पनि सर्च गर्नुहुँदैन यी ५ कुरा, गरे फसिन्छ – Janadesh Daily | ePaper
तपाईंलाई थाहा छ ? गूगलमा झुक्किएर पनि सर्च गर्नुहुँदैन यी ५ कुरा, गरे फसिन्छ
October 21, 2021 October 23, 2021 by Jandesh Daily
जनादेश टेक डेस्क ।
हामी आजभोलि जे कुरामा जिज्ञासा भएपनि गुगलको सहारा लिइ हाल्छौं । गुगलमा जे खोजे पनि जानकारी पाइने भएकाले हामीलाई गुगल सर्च गर्न निक्कै सजिलो लाग्छ । हुन पनि गुगलमा जे खोज्यो त्यसबारे जानकारी पाइन्छ । तर तपाईंलाई थाहा नहुनसक्छ गुगलमा सबै कुरा खोज्नु राम्रो हुँदैन । कतिपय कुरा खोजिए त दण्डित नै हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
के हुन् त गुगलमा खोज्न नहुने कुराः
१- यदि तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन र आफ्नो लक्षणको आधारमा कुन रोगको संक्रमण छ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ । अनि यससँगै उक्त रोगबाट निको हुन आवश्यक औषधी पनि खोज्नुहुन्छ ।
२-बम बनाउने तरिका
३-गुगलबाट सोझै मोबाइल एप डाउनलोड नगर्नुहोस्
४-निजी ईमेल गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्
५- कस्टमर केयर नम्बर
हामी कुनै न कुनै उत्पादन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । त्यसमा कुनै किसिमको समस्या आउँदा कस्टमर केयरलाई कल गर्ने विषयमा सोच्न थाल्छौं । कतिपय समय हामीलाई सम्बन्धित कस्टमर केयरको नम्बर थाहा हुँदैन । यस्तोमा गुगलको सहारा लिन थाल्दछौं । तर यसो गर्न राम्रो मानिँदैन यसले सहयोग पनि गर्दैन ।
Posted in सामाजिक सञ्जाल, सुचना प्रविधि